Hlola iSerengeti National Park, eTanzania - World Tourism Portal
Hlola iSerengeti National Park, eTanzania
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eSerengeti National park, eTanzania
Yini okufanele uyenze eSerengeti National park, eTanzania.
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha ye-Serengeti
Bukela ividiyo nge-Serengeti
Bheka iSerengeti National Park, indawo enkulu yokongiwa enyakatho yeTanzania. Ipaki igeleza iye komakhelwane Kenya lapho yaziwa ngokuthi iMasai Mara.
Lesi siqiwi singenye yezindawo ezimbalwa zokongiwa esifundeni saseSerengeti eMpumalanga Afrika, yize zibaluleke impela. Kanye nokulondolozwa kwezilwane zasendle, izimila nezindawo ezinhle zomhlaba, iSerengeti National Park ivele njengendawo enkulu yokuvakasha nezivakashi, abaningi bethatha uhambo lokuya lapho bezozihambela. Igama elithi Serengeti livela olimini lwesiMasai, okusho ukuthi 'amathafa angapheli'.
Kusungulwe Izindawo ezimbili Zamagugu Womhlaba kanye Nezindawo ezimbili Zokulondolozwa Kwezemvelo ngaphakathi kwesifunda se-30,000 km². I-Serengeti ecosystem ingesinye sezindala kakhulu emhlabeni. Izici ezibalulekile zesimo sezulu, imifino nezilwane zishintshe kakhulu kule minyaka eyizigidi edlule. Umuntu wokuqala wazibonakalisa e-Olduvai Gorge eminyakeni engaba yizigidi ezimbili edlule. Amanye amaphethini wokuphila, ukufa, ukuvumelana nezimo kanye nokufuduka asemdala njengamagquma uqobo.
Ukufuduka lapho iSerengeti mhlawumbe idume kakhulu. Ezingaphezulu kwesigidi zezihlahla zasendle cishe zama-200,000 zebras zigeleza ngaseningizimu kusuka emagqumeni asenyakatho ziya emathafeni aseningizimu ngezimvula ezimfushane njalo ngo-Okthoba nangoNovemba, bese zigeleza ngasentshonalanga nasenyakatho emva kwezimvula ezinde ngo-Ephreli, Meyi noJuni. Unamandla umuzwa wasendulo wokuhamba kangangokuba akukho somiso, i-gorge noma ingwenya egcwele izingulube ezingabambisa.
Abavakashi abangaphezu kwe-90,000 bavakashela iPaki unyaka nonyaka.
Ukubukwa kwezilwane zasendle ku-Serengeti Ecosystem ngokufuduka kwayo okukhulu kuyamangaza! Akukho ndawo emhlabeni lapho kukhona khona umbono olinganisa umbukwane wezilwane ezi-1.5 eziyizigidi eziyisithupha ezihambele imashi. Izinyoni ezinamabhele amhlophe zasendle, amadube namabhele ziyafuduka minyaka yonke ngesikhathi sokufuduka okukhulu kumathafa eSerengeti National Park eTanzania kuya emathafeni aseMaasai Mara e Kenya ngifuna utshani obusha. ISerengeti inenqwaba yezilwane ezinkulu ezincelisayo kule planethi futhi idume ngamabhubesi ayo e-2,500, okuhlushwa okuphezulu kakhulu okutholakale noma kuphi! Ngokungafani no Kenya (nangaphandle kweNgorongoro Crater), kuyaqabukela ungaboni ezinye izivakashi noma izimoto kwi-play drive eSerengeti National Park.
Izilwane zasendle zingaba yingozi futhi akufanele uzimele wedwa, ikakhulukazi ebusuku, ngenkathi usohambeni (ngesiSwahili usho nje "uhambo"). Kodwa-ke, izilwane eziningi zesatshwa abantu futhi ziyobaleka esikhundleni sokuhlasela ngaphandle kokuthi zihlaselwe noma zicasulwe. Gcina ibanga elinengqondo futhi uwaphathe ngenhlonipho.
Isikhathi sasekuseni nesisebusuku kakhulu izikhathi ezivamile ziyizikhathi ezinhle zokubheka izinhlobo zezinyoni ezingaphezu kwe-518 ezikhonjwe eSerengeti. Abanye babo bangabafuduki base-Europe abakhona ezinyangeni zasebusika zaseYurophu ukusuka ngo-Okthoba kuze kube ngu-Ephreli.
I-Serengeti iwela emaphethini emvula eyinqwaba yase-East Africa. Izimvula ezimfushane zihlanganiswe ngoNovemba / uDisemba, izimvula ezinde nezinzima ngoMashi - Meyi. Izinga lokushisa eliphakeme lenyanga lifana unyaka wonke lihlala lizungeza i-27 liye kuma-28 degrees centigrade eSeronera. E-Ngorongoro Crater ubusuku bungabanda kakhulu ngenxa yokuphakama.
Isikhumulo sezindiza esiseduze kakhulu esise Serengeti I-Kilimanjaro Isikhumulo sezindiza eduze Arusha.
Imali yokupaka ingabiza kakhulu eTanzania. Uma ubhuka uhambo lwakho nge-ejenti yokuhamba ngokuvamile ifakiwe kuzindleko zohambo lulonke. Endaweni yaseSerengeti National Park kanye neNgorongoro Conservation indawo imali epaki iyi-US $ 50 umuntu ngamunye ngosuku, ukumisa amatende angu-US $ 30 etendeni ngosuku kanye ne-US $ 30 ngemoto ngosuku. Kunenombolo yamagama athi "okungafanele ukwenze" eSerengeti. Lokhu kufaka ukusondela ezilwaneni eziseduzane kakhulu futhi eziphazamisayo, ukwenza umsindo ongamukeleki, ukukhetha izimbali noma ukucekela phansi imifino, ukulahla udoti, okweqile isivinini se-50km / h, ukuletha izilwane ezifuywayo noma izibhamu ePaki, nokuhamba ngemigwaqo ngaphakathi kwe16km yeSeronera.
Ukusuka ngoDisemba kuya kuMeyi, kuye ngezimvula, imihlambi emikhulu igxilwe esigxotsheni sotshani obelele phakathi kwe-Olduvai, Gol, Naabi neLagarja. Isisekelo eLake Masak noma eLake Lagarja lapho-ke sikulungele ngoba umuntu angahamba esuka lapho kuzo zonke izindlela. Uhambo losuku luthatha umuntu ezindaweni ezingaziwa kangako ukuze ujabulele ngokuthula epharadesi lesilwane: isibonelo, iSigodi esifihliwe, iSoito Ngum Kopjes noma iziThafa zaseKakesio. Uzojabulela inkululeko yokuhamba ezweni eliwela izwe ukuze ukwazi ukuthola izindawo ezinhle kakhulu bese unethuba lokubona izilwane ezinqabile ezinjengezinyosi, amakati asendle, ama-porcupines. Ngesizini efanele, iSerengeti eseNingizimu akufanele idlulwe.
Moru Kopjes noSeronera, eCentral Serengeti. Lapha izilwane ze-savanna zihlanganiswa nezinhlobo eziye zajwayela ukuhlala emadwaleni. Ukusuka lapha, noma usohambweni, uvakashela uSeronera maphakathi nepaki ufuna izingwe kanye namabhungane angavamile. Ungajabulela futhi ukuguquka kwesimo okuhlala kushintsha ngamahlathi egalari, ama-kopjes kanye nezimbobo zamanzi.
ILebobo, eNyakatho Serengeti. INorth Serengeti ihluke kakhulu emathafeni anotshani aseNingizimu. Njengoba kuhlale kukhona amanzi imihlambi emikhulu ibuyela lapho ngenkathi eyomile. Ngaphezu kwalokho kunezinhlobo eziningi ezihlala lapha unomphela futhi uzobona kahle izindlovu. Umhlaba uqobo lwawo yi-Bologonja Springs emngceleni oya kuwo Kenya. The 'Corridor', West Serengeti
Le yindawo ekhethekile engafane ihlinzekelwe ohambweni lwe-safari. Ukuhamba amabanga amade, ukuxhumana okungahambi kahle (izimoto ezimbalwa zine-radio) nezimo zemigwaqo ezivame ukuba nzima zivimbela iningi labavakashi ukusuka kule ngxenye yeSerengeti ehlanganisa cishe iLake Victoria. Isici esibalulekile seSerengeti ngakho-ke salahlekelwa kubo. Le ndawo ihluke kakhulu kwezinye izindawo eziyinhloko zepaki. Ngesizini eyomile izindlela ezinkulu zendlela eziya entshonalanga zingaba nezilwane ezingenalutho. Ikota yokugcina yale ndlela kodwa ilungele ngokufanelekile ukuba yikhaya lezinkulungwane zezilwane unyaka wonke. Izinsosi namazimba akhiwe lapha azihlanganisi nezihlobo zawo ezifudukayo ezidlula minyaka yonke ziqonde enyakatho. Imihlambi emikhulu yezindlulamithi, izinyathi, ama-eland, ama-topis, ama-kongonis, ama-impalas, ama-turbu ama-turbu kanye nezinsephe zika Thompson zihlala lapha ndawonye nazo. Onke amakati amakhulu nama-hyenas akhona ngenombolo enhle. Ukuphela kukaMeyi kuya ku-Agasti yisikhathi sokubuka ukufuduka kwaminyaka yonke kwe-zebra nezilwane zasendle eWestern Serengeti. Lesi futhi yisikhathi sokutholwa kwezihlahla zasendle ezifuywayo futhi amathafa anomsindo ngokuqina kwenduna kowesilisa ukuvikela izindawo zawo zesikhashana. Ukuheha okhethekile, osekudume kakhulu, kunenqwaba yezingwenya zoMfula iGreyti. Lokhu kukhulu ikakhulukazi eKirawira, lapho umfula ungashisi khona. Isikhathi esichithwe kulo mthombo wamanzi anikeza impilo singaba phakathi kokukalwa kakhulu. Lapha akuzona izingwenya nemvubu kuphela okufanele uyiqaphele kepha futhi nenani elikhulu lezinhlobo zezinyoni. Labo bavakashi abanesikhathi esiningi (noma inhlanhla) bazokwazi ukuthola imfene kaMnyama no-White Colobus emiqhele yezihlahla. Emagangeni asezindongeni amachibi aseNdabaka kuhlala kukhona ongakubona. Uzohlala uzizwa unokuthula echibini elizolile ne "korongos" engaqondakali. Ngesikhathi uhamba nohambo kule ngxenye ye-Serengeti evakashelwe okungenani, ungahlala ekamu elinokunethezeka nelikhulu kunazo zonke eduze naseKirawira, i-"Kirawira Serena Camp", eCortervation Corporation "Grumeti River Camp" (futhi ikhetheke kakhulu!) kodwa enhle futhi ebabazekayo iSpeke Bay Lodge khona kanye ogwini lweLake Victoria (i-4 km ngaphandle kwepaki, uhambo lwehora lonke ukusuka eKirawira). IMbalageti Serengeti Mbalageti Serengeti nayo isendaweni eseNtshonalanga futhi inikezela umbono ongenakuqhathaniswa phezu kwamathafa amakhulu ngenxa yendawo yawo e-stellar.
Thatha izithombe! Ukusondeza okuhle nekhadi lememori elikhulu kwenza imiphumela ibe mihle kakhulu uzobe ubheka izithombe ezinyangeni nasezinyangeni kamva. (Wagcine kusithombe sekhwalithi ephezulu futhi ungenza izinto ezimangazayo ngohlelo lwakho lwezithombe uma ufika ekhaya!)
Thatha i-balloon safari ezokunikeza ukubukwa okuhle kakhulu.
Ukuthenga eSerengeti ngokwemvelo kunqunyelwe kakhulu ngenxa yokungabikho kwezindawo zokuhlala abantu. In Arusha, noma kunjalo, namanye amadolobhana amakhulu uzothola izimakethe ze-curio lapho ungathenga khona zonke izinhlobo zemidwebo, imaski, imikhonto yamaMasai, izindwangu, izigubhu, imidwebo ye-tinga-tinga, umsebenzi we-batik, imihluko kasilika, ubucwebe bendawo, ikhofi, njll. Arusha Igugu Lesikhungo Samagugu linikezela ngezinto eziningi eziyisikhumbuzo nezobuciko. Futhi, i-Sayari Camp ibinemicimbi nabendawo yokuhlinzeka "Isitolo sezipho" esincane bese imali ibuyela ezinhlelweni zasendaweni.
Yidla ama-cashews amasha athosiwe, uphuze ijusi lekhabe, zama ubhanana omncane omnandi.
Abavakashi abaningi bamangazwa yikhwalithi nezinhlobonhlobo zokudla okutholakalayo ku-safari. Akunandaba noma uhlala endaweni yokulala, ikamu elinamasende noma ikamu lokuhamba elihamba ngezinyawo, uzonikezwa ukudla okusha okulungiselelwe ngokusho kokuthanda kanye namazinga aphesheya. Amanzi asebhodleleni angathengwa kuzo zonke izindawo zokulala kanye nasemakamu futhi anikezwa yiwo wonke ama-Safari Operators. Iziphuzo ze-Nonalcoholic zivame ukufakwa kumanani afakwa konke. Kuwukuhlakanipha ukunamathela ngeziphuzo ezinamabhodlela.
Ikhofi, ujusi we-bungo, iTusker lager, i-Amarula!
Igama kanye nomqondo weSafari Lodge zivela eTanzania. Lapha uzothola izakhiwo zomklamo othokozisayo, owakha ngokukhethekile ukuze uhambelane nesimo sendawo yamapaki, nokho ngazo zonke izinsizakalo zehhotela elibizayo, njengamachibi okubhukuda nokudla okuhle. Njengoba udla, uphuza, ukhasa echibini noma uhlala emphethweni wakho wangasese, uzokwazi ukubuka umdlalo, uvame ebangeni elingamamitha ambalwa.
Amakamu Okunethezeka Wokunethezeka
Kunamakhambi ambalwa weThabhu Lokunethezeka eSerengeti anikeza isipiliyoni seS Safari esiyingqayizivele. Amatende ngokuvamile anikela ngamakamelo okugeza we-en-suite ngokugcwele, ama-verandas angasese nefenisha ebukekayo. Ebusuku ungalalela imisindo yasendle ye-Serengeti eboshelwe embhedeni ofudumele futhi onethezekile!
Enye indlela engabizi kakhulu ukuhlala kwelinye lamakamu ayisishiyagalolunye akwaSerengeti. Uma ufisa ukuhlala kubo kufanele uthole imvume kwaTANAPA noma kumphathi wepaki oseduze.
Ukunakekelwa kwempilo kukhawulelwe esifundeni, kepha uma unenkinga funa usizo ngokuhlala kwakho. Ngokuthola izimo eziphuthumayo ezingathi sína, ungagcina ungaphakathi Nairobi, noma uthuthelwe ezweni lakini.